बक्र पङ्क्ति बिभाजकले दुई डेटा बिन्दुहरू (अन्त्यबिन्दुहरू) र दुई नियन्त्रण बिन्दुहरू (ह्यान्डलहरू) समावेश गर्दछ. नियन्त्रण पङ्क्तिले नियन्त्रण बिन्दु डेटा बिन्दुमा जडान गर्दछ. तपाईँ बक्रको आकार डेटा बिन्दु बिभिन्न प्रकारमा रूपान्तर गरि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, वा नियन्त्रण बिन्दुहरू बिभिन्न स्थानमा तानेर ।
तपाईँ पङ्क्तिको गुणहरू पनि पङ्क्ति चयन गरेर परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ र छनौट गरेर ढाँचा - पङ्क्ति.
बक्र पङ्क्तिको डेटा बिन्दुहरू र नियन्त्रण बिन्दुहरू हेर्नका लागि, पङ्क्ति चयन गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् बिन्दुहरू प्रतिमा चित्राङ्कन पट्टीमा. डेटा बिन्दुहरू वर्गहरूद्वारा प्रतिनीधित्व गर्दछ र नियन्त्रण बिन्दुहरू वृत्त द्वारा. नियन्त्रण बिन्दुले डेटा बिन्दुलाई दवाब गर्दछ ।
बक्र पङ्क्ति बिभाजक समायोजन गर्न:
वक्ररेखा चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि बिन्दु प्रतिमालाई रेखाचित्र पट्टीमा क्लिक गर्नुहोस् ।
डेटा बिन्दु पङ्क्ति रिसाइज गर्नका लागि तान्नुहोस्. यदि नियन्त्रण बिन्दुले डेटा बिन्दुलाई दवाब गर्दछ, नियन्त्रण बिन्दु तान्नुहोस् तपाईँले डेटा बिन्दु नदेख्नु भए सम्म, र डेटा बिन्दु तान्नुहोस् ।
नियन्त्रण बिन्दु तन्नुहोस्. बक्रले दिशामा तान्दछ जुन तपाईँ नियन्त्रण पट्टी तान्नुभयो ।
बक्र पङ्क्ति स्प्लिट गर्न:
तपाईँ बक्र पङ्क्ति मात्र स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ जुन सँग तीन वा बढी डेटा बिन्दुहरू छ ।
डेटा बिन्दु चयन गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् बक्र स्प्लिट गर्नुहोस् प्रतिमा सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा ।
बन्द आकार निर्माण गर्न:
सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस् बेजियर प्रतिमा बन्द गर्नुहोस् ।
बक्र पङ्क्तिमा डेटा बिन्दु रूपान्तर गर्न:
डेटा बिन्दु क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँ रूपान्तर गर्न चाहनुहुन्छ, र तलका एक गर्नुहोस्:
डेटा बिन्दु स्मूथ बिन्दुमा रूपान्तर गर्न, क्लिक गर्नुहोस् स्मूथ कारोवार प्रतिमा सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा.
डेटा बिन्दुलाई सिमेट्रिकल बिन्दुमा रूपान्तर गर्न, क्लिक गर्नुहोस् सिमेट्रिक कारोवार प्रतिमा सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा.
डेटा बिन्दुलाई कुना बिन्दुमा रूपान्तर गर्न, क्लिक गर्नुहोस् कुनो बिन्दु प्रतिमा सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा.
डेटा बिन्दु थप गर्नका लागि:
सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस् बिन्दुहरू प्रतिमा घुसाउनुहोस् ।
पङ्क्ति क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ बिन्दु थप गर्न चाहनुहुन्छ, र छोटो दूरी तान्नुहोस् ।
यदि डेटा बिन्दु सँग नियन्त्रण बिन्दु छैन भने, डेटा बिन्दु चयन गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् रूपान्तर गर्नुहोस् बक्र प्रतिमा सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा ।
डेटा बिन्दु मेटाउनका लागि:
तपाईँले मेटाउन चाहनु भएको बिन्दु क्लिक गर्नुहोस् ।
सम्पादन बिन्दुहरू पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस् बिन्दुहरू प्रतिमा मेटाउनुहोस् ।
Title is: बक्रहरू सम्पादन